FAMPIROBOROBOANA NY FIZAHANTANY: Isan’ny laharam-pahamehana ny fisarihana mpampiasa vola ho avy eto amintsika – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 1:18
Nivory niaraka tamin'ny sehatra tsy miankina ny Minisitry ny Fizahantany.
Accueil/Songadim-baovao/FAMPIROBOROBOANA NY FIZAHANTANY: Isan’ny laharam-pahamehana ny fisarihana mpampiasa vola ho avy eto amintsika
FAMPIROBOROBOANA NY FIZAHANTANY: Isan’ny laharam-pahamehana ny fisarihana mpampiasa vola ho avy eto amintsika
Na dia efa nisokatra aza ny sisintanin’i Madagasikara, mbola isany sakana mahatonga ny fihenan’ny mpizahatany tonga eto amintsika ny fiparitahan’ny valanaretina, tsy eto amintsika irery fa hatrany ivelany. Eo koa ireo fepetra ara-pahasalamana maro samihafa ka mahatonga fahalainana ho an’ny olona sasany tokony ho avy aty Madagasikara. Ho an’ity taona ity, noho izany, teboka fito lehibe no nambaran’ny teo anivon’ny Minisiteran’ny Fizahantany fa paikady hahafahana mampiroborobo indray izany sehatry ny fizahantany izany eto Madagasikara.
Natolotry ny Minisiteran’ny Fizahantany teo anatrehan’ireo sehatra tsy miankina sy mpiara-miombona antoka eo amin’ny tontolon’ny fizahantany omaly ny tondrozotra hitondrana ny lafiny fizahantany amin’ity taona 2022 ity, izay mirakitra teboka lehibe miisa fito. Voalohany amin’izany ny fitadiavana ny fomba hitarihana ny olona hampiasana vola eto Madagasikara, eo amin’ny sehatry ny fizahantany. Ny fijerena ireo paikady tokony hapetraka hampiroboroboana ireo toerana tsara tsidihana eto Madagasikara kosa ny teboka faharoa. Ny teboka fahatelo dia ny fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny fomba fiasan’ny mpisehatra ara-pizahatany eto Madagasikara. Ny fanatsarana ny fomba fiasa amin’ny ankapobeny kosa ny fahefatra, toy ny famoahana ny code du tourisme, ny fanatsarana ny fomba fiasa ao anatin’ny Minisitera, ny serasera miaraka amin’ny sehatra tsy miankina. Ny teboka fahadimy dia ny “digitalisation” an’ireo sampandraharaha rehetra eo anivon’ny Minisitera. Ao anatin’izany ny fampiasana teknolojia vaovao amin’ny “fiche de débarquement”. Izany dia manampy ny tomponandraikitra hahafahana mahazo ara-potoana ny statistika momba ny mpizahatany tonga eto amintsika. Fantatra miaraka amin’izany koa, ankoatra ny isany, ny fiaviana sy ny toerana halehan’ny mpizahatany. Ny teboka fahenina dia ny fanamafisana ny fiarahamiasa miaraka amin’ny mpiara-miombona antoka rehetra. Ary ny teboka fahafito farany dia ny fiarahana miasa eo amin’ny samy Minisitera.
Niaraha-nanangana tamin’ny sehatra tsy miankina
Tontosa omaly ity fihaonana teo amin’ny Minisitera sy ireo mpisehatra amin’ny tontolon’ny Fizahantany ity. “Ny anton’ny fivoriana dia ny mba hahafahan’ny Minisitera mampiseho amin’izy ireo ireo tetikasa ho apetraky ny Minisitera amin’ity taona 2022 ity, na ny tondrozotra “feuille de route””, hoy ny Minisitra Joel Randriamandranto. Tsara ho fantatra fa io tondrozotra io dia niaraha-nanangana tamin’ny sehatra tsy miankina ihany. Ity fihaonana omaly ity ihany koa, noho izany, no nihainoana ireo mpisehatra ireo, amin’izao fiatombohan’ny taona izao, ny amin’ny fijerin’izy ireo ny hanatsarana ny lafiny fizahantany. Tsara ho fantatra fa na misokatra aza ny sisin-tanin’I Madagasikara, dia mbola eo ihany ny valanaretina. “Ary indrindra, ilay fepetra napetraka amin’ny fitiliana PCR sy ny tsy fahafahana mody raha sendra positif tampoka sy ny sisa, izay miditra na mivoaka an’I Madgasikara, dia voatery mitoka-monina anatin’ny folo andro… izany rehetra izany dia mampihemotra ny mpizahatany miditra na manao voyage amin’ny ankapobeny aty amintsika”, hoy hatrany ny Minisitra.
Nandritra io fihaonana omaly io ihany koa no nanamafisan’ny Minisitra fa zava-dehibe hatrany, ary hotohizana ny fampiroboroboana ny fizahantany anatiny.
CSB II ANDOHARANOFOTSY: Voahosotra ho “CSB sakaizan’ny WASH”
ADY AMIN’NY TSY FANJARIAN-TSAKAFO : Hatsangana amin’ny volana Mey ny ozinina mpamokatra sakafo ao Tolagnaro
ADY AMIN’NY COVID -19: “Isika rehetra no tompon’andraikitra” hoy ny Praiminisitra Ntsay
FEPETRA HO AN’NY 15 ANDRO MANARAKA : Mitohy ny Hamehana, voarara ny famoriana olona mihoatra ny 200